१२ बर्षसम्म ससुराले बुहारीलाई बच्चा जन्माउन रोक लगाउनुको कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित ! - Rising Dainik
December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on १२ बर्षसम्म ससुराले बुहारीलाई बच्चा जन्माउन रोक लगाउनुको कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित !
अञ्जलि राई । बुढेसकालमा सबैजना आफ्ना नातिनातिना खेलाउने सपना देख्छन् । बुढेसकालमा उनीहरु नातिनातिना खेलाउनु खुशी र सम्पत्ती भन्दा धेरै माथि मान्दछन् ।तर भोपालमा यस्ता वृद्ध हुनुहुन्छ जसले नाति–नातिनाहरुको जन्ममा निषेध गरेका छन् । त्यो युगल जोडीको बच्चा नहुनुमा बाबु दोषी रहेको खुल्न आएको छ । बच्चा नपाएकोमा उनले एक्लो छोरा र बुहारीलाई नाति–नातिना नजन्माउन दबाब दिनु नै प्रमुख कारण भएको खुल्न आएको हो ।
ससुराले यदि छोरा बुहारीले बच्चा जन्माए भने उनीहरू दुबैलाई उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिबाट निकालिनेछ । विवाह गरेको सात बर्ष पछि पनि, बच्चाको खुशी नहुँदा दुखी बुहारी कुतुम्ब अदालतमा पुगेकी छिन् ।उनले आफ्नो ससुरलाई सम्झाउन भनेर अनुरोध गरेकी हुन् । तर, ससुरालाई पटकपटक परामर्श पछि पनि विचार परिवर्तन गर्न मानेनन् । अब उनलाई अर्को परामर्शका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।
जब परामर्शदाताले सेवानिवृत्त अधिकारीलाई बोलाए, उनले तर्क गरे, ‘यदि बुहारीको बच्चा भयो भने उनीहरूले मेरो हेरचाह गर्दैनन् । मलाई वृद्धाश्रम पठाउने छन् । छोराको बच्चाको जन्म भएको छैन ।छोरा र बुहारीको पहिलो कर्तव्य भनेको मेरो सेवा गर्नु हो । उनीहरूले मेरो मृ’त्यु पछि बच्चा जन्माउन सक्छन्। यदि बुहारीले बच्चा चाहान्छ भने, त्यसले मेरो छोरासँग सम्बन्धविच्छेद गर्न र अर्को विवाह गर्न सक्छिन् ।’
एक जना साथीको आवश्यकता भएको भन्दै कलाकार गजुरेलले खुलाए दोस्रो बिवाह गर्नुका कारण
आफ्नै समुहभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएपछि सबै कदममा असफल हुँदै ओली, प्रधानमन्त्री पद समेत बिक्रि भएन
February 13, 2021 Ramash Kunwar